Dowladaha Shiinaha iyo Ruushka oo hogaaminaya wada hadala amaanka looga hadlayo. | Starfm.co.ke	Tuesday, May 21st, 2013	Home
Dowladaha Shiinaha iyo Ruushka oo hogaaminaya wada hadala amaanka looga hadlayo.
Share06.Jun.2012:- Dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ayaa hogaaminaya kulanka kooxda ee looga hadlayo horumarinta iyo amaanka bartamaha wadamada Asia.
Hogaamiyayaal afar wadan iyo wadamada kale ee ay ka midkka yihiin wadamada Iraan, Mongolia, India, Pakistaan dalka Afganistaan ayaa ka qayb galaya kulankaasi oo socon doona mudo laba maalin ah.
Lix wadan ee ku jira kooxda Shangahai Cooperation Organisation SCO oo ay ku jiraan laba wadan oo dhaqaalaha dunida awood ku leh iyo qaar kamid ah wadamada ku yaala bartamaha Asia ee ay kamidka yihiin Kazakhatan, Tajikistan, Uzbakistan iyo kuwa kale oo looga hadlayo shirkaasi ayaa waxaa la dhisay ururkoodaasi sanadkii 2001 dii.
Kulamo kale oo badan oo hal dhinac ah ayaa sidoo kale lagu wadaa inay wada yeeshaan masuuliyiinta wadamadaasi iyo Madax waynaha dalka Ruushka Vlidimir Putin iyo madax waynaha dalka Shiinaha mr Hu Jintao.